News - မည်သည့်အရာကပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အရာ၊
1. TPE ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ ခုခံတီးဝိုင်း
TPE ပစ္စည်းသည်ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးဆန့်နိုင်သည့်စွမ်းအားရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးချောမွေ့သည်။ ၎င်းကို extruder မှတိုက်ရိုက် extruded လုပ်ပြီးအပြောင်းအလဲသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ TPE သည်အဆက်မပြတ်ရေနံခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ TPE သည်မွှေးကြိုင်သောအနံ့နှင့်မီးလောင်သည်။
TPE ပစ္စည်းသည်ရောနှောထားသောပြုပြင်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမှာချိန်ညှိနိုင်မှုများစွာရှိပြီးတိကျသောဆွဲငင်အားသည် ၀.၈၉ မှ ၁.၃ အကြားဖြစ်သည်။ မာကျောမှုသည်များသောအားဖြင့် 28A-35A Shore အကြားဖြစ်သည်။ အလွန်မြင့်မားလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်နိမ့်မာကျောခြင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ခုခံတီးဝိုင်း.
အဆိုပါ TPE ခုခံတီးဝိုင်း SEBS ကိုအဓိကပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ SEBS သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသောပစ္စည်းများနှင့် REACH စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးအဖွဲ့များနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ TPE ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော elastic belt သည်မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးအမှုန်များနှင့်အရာ ၀ တ္ထုများမပါ ၀ င်ဘဲအပူချိန်နိမ့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မာကျောသော၊ ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ၄၀-၉၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်းပြင်ပတွင်အသုံးပြုခြင်းတွင်အက်ကွဲခြင်းမရှိနိုင်ပါ။
TPE, SEBS တွင်အသုံးပြုသောအဓိကပစ္စည်းတွင် Butadiene ပမာဏများစွာပါဝင်ပြီး၎င်းတွင်မြင့်မားသောဆန့်ခြင်းအချိုးအစားနှင့်ပုံပျက်သောပုံသဏ္smallာန်ရှိသည်။ ၃ ဆကို ၃၀၀ ဆကျော်ဆန့်ခြင်းကအနည်းငယ်ပုံပျက်စေနိုင်သည်၊ သို့သော် ၅% ထက်မပိုစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
2. စေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ ခုခံတီးဝိုင်း
Latex သည်ကောင်းသောခုခံနိုင်မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသော elasticity၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် elongation ကို ၇ ကြိမ်ကျော်သည်။ ၎င်းသည်လေထဲတွင်အသက်ကြီးရန်လွယ်ကူပြီးနှင်းခဲဖြန်းသည့်အခါမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝကစေးများတွင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသောပရိုတိန်းမော်လီကျူးများရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အချို့သောလူများတွင်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။
သဘာဝစေးများကိုရာဘာပင်မှခုတ်ယူသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝရော်ဘာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရည်၊ နို့ရည်အဖြူနှင့်အရသာမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောသဘာဝစေးစေးသည်ရာဘာပါဝင်မှု၏ ၂၇% မှ ၄၁.၃%၊ ရေ ၄၄% မှ ၇၀%၊ ပရိုတင်းဓာတ် ၀.၂% မှ ၄.၅%၊ သဘာဝအစေး၏ ၂% မှ ၅%၊ သကြားဓာတ် ၀.၃၆% မှ ၄.၂% နှင့် ၀.၄% တို့ပါဝင်သည်။ ပြာ။ ၄ င်း၏အဏုဇီဝသက်ရှိများနှင့်အင်ဇိုင်းများကြောင့်သဘာဝအစေးကပ်မှုမဖြစ်စေရန်အမိုးနီးယားနှင့်အခြားဓာတုတည်ငြိမ်မှုများမကြာခဏပေါင်းထည့်သည်။
Rကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ နှစ်ထပ်စလုံးတွင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ ၏လယ်ပြင်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်ခုခံတီးဝိုင်းs, TPE ပစ္စည်း၏ရွေးချယ်မှုသည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို function ကိုအပြည့်အဝနိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး, စျေးနှုန်းစျေးပေါသည်။ ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်သော်ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည် ဟူ၍ မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ရ ဦး မည်။
2. TPU အကြားခြားနားချက် ခုခံတီးဝိုင်း နှင့် TPE ခုခံတီးဝိုင်း
TPU နှင့် TPE သည်စာလုံးကွာခြားသော်လည်း TPU ကိုအသုံးပြုခြင်း ခုခံတီးဝိုင်း နှင့် TPE ခုခံတီးဝိုင်း ဝေးကွဲပြားခြားနားသည်။ TPU ၏သေးငယ်သောပုံခုခံတီးဝိုင်း ချည်ထိုးအဝတ်အထည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏လယ်ပြင်၌ထွန်းလင်း, ထိုကဲ့သို့သောချည်ထိုးအဝတ်၏ကော်လာနှင့် cuffs, ပခုံးချုပ်ရိုးနှင့်ဘေးထွက်ချုပ်ရိုး။ TPE elasticity သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခွန်အားလမ်းကြောင်းသည်ကြံ့ခိုင်ရေးကဲ့သို့သောကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အတိအကျရှိသည်ခုခံတီးဝိုင်းs, ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများတင်းမာမှုခညျြအနှောများနှင့်။ ဒါ TPU ဟုတ်မဟုတ်ခုခံတီးဝိုင်း သို့မဟုတ် TPE ခုခံတီးဝိုင်းသူတို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြာရှည်ခံသည်။ ၎င်းတို့အကြားအခြေခံအကျဆုံးခြားနားချက်မှာအသွင်အပြင်အကျယ်နှင့်အထူနှင့်ကွာခြားမှုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကုန်ကြမ်းလည်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
TPU ရဲ့အရောင် ခုခံတီးဝိုင်း ယေဘုယျအားဖြင့်အကျယ်သည် 2MM နှင့် 30MM ကြားဖြစ်ပြီးအထူသည် 0.08MM နှင့် 1MM ကြားတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကော်လာနှင့်ချည်ထိုးထားသောအဝတ်များ၏ cuff များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောမမြင်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးစွမ်းရန်ပခုံးချုပ်ချုပ်၏ဘေးထွက်ချုပ်ရိုးများကိုပုံဖော်ထားသည်။ အရောင်ကိုက်ညီမှုကိုစဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ; ၎င်း၏အကျယ်သည်များသောအားဖြင့်ချုပ်ရိုးများနှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည်ခါးပတ်ကိုဖျောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ပါးလွှာသောအထူသည်အပ်ချုပ်ပြီးနောက်ချုပ်ထားသောအထည်များ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
TPE အရောင် ခုခံတီးဝိုင်း အစိမ်း၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ အထွေထွေအကျယ်မှာ ၇၅-၁၅၀ မီလီမီတာဖြစ်ပြီးအထူသည် ၀.၃၅ မီလီမီတာ၊ ၀.၄၅ မီလီမီတာ၊ ၀.၅၅ မီလီမီတာ၊ ၀.၆၅ မီလီမီတာစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ။ , အရောင်များကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများကိုရွေးချယ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ သော TPE ကြောင့်ဖြစ်သည်ခုခံတီးဝိုင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်။ ထူသည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတင်းမာမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်သင့်တော်သည်။
TPU နှင့် TPE နှစ်ခုလုံးသည်ရော်ဘာ elasticity ဖြင့် thermoplastic ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးနှစ်ခုလုံးသည်ကောင်းမွန်သောရော်ဘာ elasticity ရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် TPE သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အမြင်အာရုံလေ့လာခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် TPE နှင့် TPU ကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ အသေးစိတ်နှင့် စတင်၍ TPE နှင့် TPU အကြားခြားနားချက်များ
၁) TPU ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် TPE ထက်သာသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော TPE ကဲ့သို့ကပ်ရန်မလွယ်ကူပါ;
၂) TPU ၏တိကျသောဆွဲငင်အားသည် ၁.၀ မှ ၁.၄ မှ ၃.၃ အတွင်း TPE သည် ၀.၈၉ မှ ၁.၃ အတွင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားသည်။ အဓိကအားဖြင့်ရောစပ်မှုပုံစံများဖြစ်သောကြောင့်တိကျသောဆွဲငင်အားသည်များစွာပြောင်းလဲသည်။
၃) TPU သည်ရေနံခံနိုင်ရည်ပိုကောင်းပြီး TPE တွင်ရေနံခံနိုင်ရည်နည်းသည်။
၄) TPU သည်မီးမွှေး။ မီးခိုးနည်းသော၊ မီးခိုးနည်းသောလောင်ကျွမ်းမှုနှင့်အတူလောင်ကျွမ်းသည်။ အနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းသည့်အသံထွက်ပေါ်လာသည်။ TPE သည်မီးမွှေးသည့်အချိန်တွင်အနံ့ဆိုးထွက်လာပြီးမီးခိုးလည်းနည်းလာသည်။
5) TPU ၏ elasticity နှင့် elastic recovery recovery သည် TPE ထက်သာသည်။
၆) TPU အပူချိန်ခံနိုင်ရည်သည် -60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, TPE သည် -60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 105 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်;
၇) အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုအရအချို့သောပိုလျှံသောထုတ်ကုန်များအတွက် TPU ထုတ်ကုန်များသည် TPE ထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောခံစားမှုနှင့်ပွတ်တိုက်အားခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ TPE ထုတ်ကုန်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောခံစားမှု ရှိ၍ ပွတ်တိုက်အားစွမ်းအားကိုအားနည်းစေပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် TPU ခုခံတီးဝိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မာကျောခြင်းမာကျောခြင်းနှင့်ချိုးဖျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်ကြိုးထိုးကော်လာ cuff Hemming နှင့်ပခုံးချုပ်ရိုးချုပ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ အဆိုပါ TPEခုခံတီးဝိုင်း အရောင်အမျိုးမျိုးရှိပြီးထိတွေ့မှုအတွက်အဆင်ပြေသည်၊ မြင့်မားသောလမ်းဖောက်နှုန်းရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောဒဏ်ခံနိုင်မှုရှိသည်။ ဒါဟာကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
post အချိန် - မေလ -31-2021
လိပ်စာ: ၂၁၂၂၂၁ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Jiangsu အမှတ် ၆၆ Fangxian စက်မှုဇုန်၊ danyang City၊ Jiangsu